बेरुत विस्फोटन : ६० जना अझै बेपत्ता – NepalajaMedia
बेरुत विस्फोटन : ६० जना अझै बेपत्ता
August 8, 2020 222
एजेन्सी, २४ साउन । लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटनका कारण बेपत्ता भएका मध्ये ६० जना अझै सम्पर्क बिहिन रहेका छन् । दुर्घटना भएको चार दिन वितिसक्दा समेत बेपत्ता भएकाहरुलाई पत्ता लगाउन नसकिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
Prevकेरला विमान दुर्घटना : मृत्यु हुनेकाे संख्या १८ पुग्याे, एक मृतकमा काेराेना पाेजिटिभ !
Nextमेयर सहित एकै दिन ५२ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँमा जोरबिजोर प्रणाली र विद्यालय ब’न्द गर्ने तयारी
आज सुनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७३ पुग्यो : स्वास्थ्य मन्त्रालय